सीडीओकी श्रीमतीलाई सस्तोमा माछा नदिएको भन्दै पसल ‘सील’
January 3, 2022 N88LeaveaComment on सीडीओकी श्रीमतीलाई सस्तोमा माछा नदिएको भन्दै पसल ‘सील’
चितवन । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै जिल्लाका मत्स्य व्यवसायीमाथि दादागिरी देखाएका छन् । माछा किन्न गएकी आफ्नी श्रीमतीलाई बढी मूल्य लिएको भन्दै उनले आफैं पुगेर माछापसल पुगेर सिलबन्दी गरेको घटना बाहिरिएको छ । सीडीओ तामाङकी श्रीमती आइतबार सरकारी गाडी लिएर करिब २५ किमी दुरीमा रहेको दिव्यनगरस्थित एक्वा ब्रिडर्स नेपालको पोखरीमा […]
श्रीमान् एमाले र श्रीमती माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य, याे कस्ताे राजनीति हाे ?
January 3, 2022 N88LeaveaComment on श्रीमान् एमाले र श्रीमती माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य, याे कस्ताे राजनीति हाे ?
काठमाडाैं । आइतबार सम्पन्न नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनको बन्द सत्रले २३६ जनाको नाम केन्द्रीय सदस्यको नाम टुंगो लगाएको छ । २९९ केन्द्रीय सदस्यमध्ये अहिले २३६ जनाको नाम टुंग्याइएको हो। केन्द्रीय सदस्यमा समानुपातिकतर्फ १२५ र खुलातर्फ १११ गरी २३६ जनाको नाम टुंग्याइएको हो। माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय सदस्यको सूचिमा कुमारी मोक्‍तानको नाम पनि अटाएको छ। माओवादी […]
आकाशबाट माछाको वर्षा, हे भगवान के हुँदैछ यस्ताे …. परे संसारै चकित !
January 3, 2022 N88LeaveaComment on आकाशबाट माछाको वर्षा, हे भगवान के हुँदैछ यस्ताे …. परे संसारै चकित !
एजेन्सी । के तपाईंले कहिल्यै सुन्नु भएको छ कि आकाशबाट माछा परेको वा खसेकाे छ ? यदि हैन भने हामी तपाईलाई हालै घ टे को यस्तै घ ट नाको बारेमा जानकारी गराउँदैछाैँ। आकाशबाट माछा परेको ठाउँ। थाहा पाउनुहोस् यो मामिला कहाँ हो… जब पानी पर्छ, तपाईं मौसमको आनन्द लिन आकाशतिर फर्केर उभिन चाहनुहुन्छ। वर्षाको थोपाले […]
प्रसिद्ध सुपादेउली मन्दिरकाे दर्शन गरी हेर्नुस् पुष २० गते मंगलबारकाे राशिफल
January 3, 2022 N88LeaveaComment on प्रसिद्ध सुपादेउली मन्दिरकाे दर्शन गरी हेर्नुस् पुष २० गते मंगलबारकाे राशिफल
२०७८ साल पुस २० गते सन् २०२२ जनवरी ४ तारिक मंगलबार, द्वितीया, शुक्ल पक्ष, चन्द्र दर्शन मीन राशिका व्यक्तिहरूको कामले अरूलाई खुसी बनाउन सक्छ। अर्कोतर्फ, कुम्भ राशि भएका व्यक्तिहरूले पैसाको पछि दौडनुको सट्टा परिवारमा ध्यान दिनु पर्छ। तुला ( तुला ) राशि भएका व्यक्तिले धनको हिसाबले शुभ समाचार पाउन सक्नेछन् । मेष: आज मंगलबार तपाईको […]
रेशम चाैधरी जेलमा, पार्टी दर्ता गर्न रञ्जिता पुगिन् थारू झाँकी लिएर निर्वाचन आयोग
January 3, 2022 N88LeaveaComment on रेशम चाैधरी जेलमा, पार्टी दर्ता गर्न रञ्जिता पुगिन् थारू झाँकी लिएर निर्वाचन आयोग
काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ताका लागि रेशम चौधरीका समर्थकहरु निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन् । सो पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरु चौधरीका तस्वीर अंकित प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर दल दर्ताको निवेदन दिन निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगेका हुन् । उनीहरु काठमाडौंको भृकुटीमण्डपबाट बाजागाजा र झाँकीसहित आयोगको कार्यालय कान्तिपथ पुगेका छन् । र्‍यालीमा चौधरीकी श्रीमतीसमेत छिन् । टीकापुर हत्याकाण्डका प्रमुख […]
प्रचण्ड फेरि माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष बने, लिए अध्यक्षको सपथ
January 3, 2022 January 3, 2022 N88LeaveaComment on प्रचण्ड फेरि माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष बने, लिए अध्यक्षको सपथ
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् । माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनपछि बसेको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट प्रचण्ड सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले राखेको प्रस्तावमा कृष्णबहादुर महराले समर्थन जनाएका थिए । उक्त प्रस्ताव केन्दीय कमिटिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो । माओवादी केन्द्रको पहिलो केन्द्रीय […]
शनि राशीमा सूर्यको गोचर, ५ राशिका व्यक्तिलाई हुँदैछ शुभ
January 3, 2022 N88LeaveaComment on शनि राशीमा सूर्यको गोचर, ५ राशिका व्यक्तिलाई हुँदैछ शुभ
ग्रहहरूको राशि परिवर्तनले हाम्रो जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्छ। यदि यो परिवर्तन ग्रहहरूको राजा सूर्यको स्थितिमा भयो भने यसको प्रभाव धेरै गुणा बढ्छ। सूर्य सफलता, कीर्ति, स्वास्थ्य, नेतृत्व आदिको कारक ग्रह हो। जनवरी १४ गते सूर्य मकर राशिमा शनि राशीमा प्रवेश गर्दैछ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यो परिवर्तन ५ राशिका मानिसका लागि निकै शुभ साबित हुनेछ […]
January 3, 2022 N88LeaveaComment on सुनको भाउ घट्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सोमबार सुनको भाउमा सामान्य गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाल सुन प्रतितोला ९३ हजार ४०० रुपैयाँ कायम भएकोमा सोमबार ३०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९३ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको हो । सोमबार तेजाबी सुन प्रतितोला ९२ हजार छ सय रुपैयाँ कायम भएको महसंघले जनाएको छ […]
मन्त्री झाँक्रीको ‘पिर्के सलामी’ : सामाजिक सञ्जालमा भाइरल !
January 3, 2022 N88LeaveaComment on मन्त्री झाँक्रीको ‘पिर्के सलामी’ : सामाजिक सञ्जालमा भाइरल !
काठमाडाैं। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सचिव तथा सहरी विकासमन्त्री रामकुमार झाँक्रीले ‘पिर्के सलामी’ लिएको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएपछि यसको व्यापक आलोचना भएको छ । मन्त्री झाँक्रीले गृहजिल्ला गुल्मीको मदाने गाउँपालिकास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय पुर्कोट दहमा ‘पिर्के सलामी’ लिएकी थिइन् । जुन उनकै गाउँमा पर्ने र मन्त्री झाँक्रीकै पहलमा उक्त प्रहरी कार्यालय स्थापना गरिएको हो […]
राष्ट्रियसभाका १९ सिटमा मिल्यो भागबण्डा, हेर्नुस कसकाे भागमा कति ?
January 3, 2022 N88LeaveaComment on राष्ट्रियसभाका १९ सिटमा मिल्यो भागबण्डा, हेर्नुस कसकाे भागमा कति ?
काठमाडाैं । सत्तारुढ गठबन्धनमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको १९ सिटमा भागबण्डा टुंगिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार विहान बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको १९ सिटमा भागबण्डा मिलेको हो । सत्तारुढ गठबन्धनमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन १९ सिटमा भागबण्डा टुंगिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार विहान बसेको बैठकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको १९ सिटमा भागबण्डा मिलेको हो । नेकपा […]